Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra - fonosana Ziling
Kitapo fanamafisam-peon'ny tsindry
Ny liner dia mifangaro amin'ny akora vita amin'ny foam izay mifangaro amin'ny fahatsapana tsindry avo lenta. Ity liner ity dia antsoina koa hoe liner one-piece. Izy io dia manome tombo-kase henjana miaraka amin'ny fametahana amin'ny fitoeran-tseranana amin'ny alàlan'ny tsindry fotsiny. Tsy misy tombo-kase sy fitaovana fanamafisana. toy ny liner induction adhesive induction mafana, azo ampiasaina amin'ny karazana kaontenera rehetra: fitoeran-plastika, vera ary vy. Saingy tsy natao ho an'ny fananana sakana izy io, ny vokany dia kely noho ny teo aloha, noho izany dia ampirisihina hampiasaina ho an'ny entana vovoka matevina, toy ny vokatra sakafo, kosmetika ary fikarakarana ara-pahasalamana.
Ny liner foam dia tanjona matetika amin'ny ankapobeny, vita amin'ny foam polyethylene azo esorina. Ireo dia tsy mamorona tombo-kase, ary matetika ampiasaina amin'ny fisorohana ny fivoahana.
Form Liner dia singa iray, ny fitaovana dia EVA, EPE sns.
Amin'ny elastika manokana dia mandefasa fifanarahana sy seranan-tseranana.
Mety amin'ny karazana famehezana fitoeran-javatra rehetra, azo ampiasaina miverimberina, fa ny vokan'ny tombo-kase dia ankapobeny.
Azo ampiasaina aorian'ny sy alim-bary vita amin'ny fambolena vita amin'ny plastika ary tsara kokoa ny valin'ny famehezana.
Ny tena mampiavaka ny madio, vovoka, dia tsy mifoka etona rano, tsy noho ny hamandoana na ny hafanana hanovana ny fitombenany.
Ny tombo-kase lakaoly dia azo amboarina amin'ny singa iray na roa arakaraka ny filan'ny mpanjifa. Misy sosona mafana miempo adhesive nopetahany takelaka amin'ny famehezana ny landin'ny tombo-kase aluminium. Aorian'ny fizotran'ny hafanana amin'ny alàlan'ny masinina fanamafisam-peo na vy mandeha amin'ny herinaratra, hasiana tombo-kase eo amin'ny molotry ny kaontenera ny sosona adhesive. Ity karazana liner ity dia azo ampiasaina amin'ny karazana fitoeran-javatra rehetra., Indrindra ho an'ny fitoeran'ny fitaratra, fa ny vokany dia tsy tsara noho ny valin'ny tombo-kase fampidirana.